Ra’iisul Wasaare C.wali oo booqanaya Garoowe |
Ra’iisul Wasaare C.wali oo booqanaya Garoowe
Super P-Force no rx, buy dapoxetine online. Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane C.wali Sheekh Axmed Maxamed iyo Wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa waxaa lagu wadaa in ay booqasho ku tagaan Magaalada Garoowe ee Caasimada Maamulka Puntland.
Saraakiil ka tirsan Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Mudane C.wali iyo Madaxweyne Gaasi ay ka wada hadli doonaan arimo badan oo ku aadan Dastuurka maadaama Maamulka Puntland ay dhaliilsan yihiin Dastuurka DFS.
Wasiiro iyo Madaxweynaha Maamulka Puntland ayaa waxey wadaan qaban qaabo xoogan oo lagu soo dhaweenayo Ra’iisul Wasaaraha Umadda Soomaaliyeed iyadoona Safarkan la filayo in si wanaagsan ay isugu soo dhawaadaan DFS iyo Puntland.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa bixi doono todobaadkan gudihiisa balse waxaa ilaa iyo iminka aan si rasmo ah aan loo shaacin Waqtiga uu ka ambabaxayo Magaalada Muqdisho islamarkaana uu tagayo Magaalada Garoowe ee Maamulka Puntland.
Ugu dambeyn, Safarada Ra’iisul Wasaare C.wali Sheekh Axmed Maxamed ayaa waxaad moodaa in maalmahii u dambeeyay uu soo laab laabtay Iyadoona Xaalad kacsanaan ah ay ka jirta Magaalada Muqdishu kadib markii Xildhibaanada Baarlamaanka ay diideen Xasan Sheekh Maxmuud.